Dagaal Saddex Geesood oo ka Socda Jubbada Hoose iyo Diyaarad Lagu Soo Riday - iftineducation.com
Ciidama Kenya Oo ku Jira Dhufees aDaG
iftineducation.com – Wararka iminka naga soo gaaraaya gobolka Jubbada Hoose ayaa soo sheegaaya in dagaal xooggan oo saddex geesood ah uu ka socdo deegaano dhowr ah oo katirsan gobolkaasi.
Dagaalada oo ay ka qayb qaadanaayaan diyaaradaha dagaalka Kenya ayaa waxa uu ka socdaa deegaanada Harboole, Biibi iyo Birta Dheer ee gobolkaasi.
Dagaalka waxaa soo qaaday Ciidamada huwanta oo muddooyinkanba weerar ku ahaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Dagaalka oo hadda si xooggan u socda waxaa ka qayb qaadanaaya diyaaradaha dagaalka Kenya, dhanka deegaanka Harboole wararka aan ka helayno waxay sheegaayaan in dagaalka lagu soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Dowladda Kenya.
Dhanka deegaanka Birta Dheer oo ay shalay galab si buuxda ula wareegeen Ciidamada huwanta ah, dagaalku waxa uu ka socdaa deegaan Birta Dheer ka xiga dhanka magaalada kaasi oo Kismaayo u jira 50-KM.
Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalada oo ah kuwo u socda qaab saf ballaaran ah, saddex deegaan ee dagaalku ka socda Kismaayo waxay kaga kala aadan yihiin jihooyinka Galbeedka waqooyiga.
Gudaha magaalada waxaa ka jira xaalad kacsan, waxaana Isbitaalka Kismaayo goordhow la gaarsiiyey dhaawacyada dagaalyahano katirsan Al shabaab.
War goordhowayd kasoo baxay Al shabaab waxaa lagu sheegay in dagaalka lagu soo riday labo diyaaradood oo nooca dagaalka ah, hase yeeshee dadka deegaanka waxay inoo sheegeen in dagaalka lagu soo riday mid kamid ah diyaaradaha dagaalka Kenya.
Saraakiil katirsan Ciidamada Dowladda oo aan la xiriirnay ayaa waxay sheegeen in dagaalka maanta uu yahay kii lagu kala bixi lahaa sida ay hadalka u dhigeen, balse waxay ka gaabsadeen in ay faah faahin ka bixiyaan dagaalka iyo khasaaraha kasoo gaaray.
NB: Fadlan Akhriste Firkirka aad Dhiibato haku Ekaado Warkaan oo Keliya